ကြက်သား ဒန်ပေါက် | Wutyee Food House
နာနတ်သီး ထမင်းကြော် »
April 3, 2012 by chowutyee
ကြက်သား ဒန်ပေါက် (၈ယောက်စာ)
မြှောက်ပိုင်း အိန္ဒိယစတိုင် ဒန်ပေါက် လေးပါ။ ရန်ကုန်မှာ စားနေကျ ဒန်ပေါက်တွေနဲ့ အရသာ၊ အနံ့မတူပေမယ့် ပိုလို့တောင် စားကောင်းပါတယ်။ မြှောက်ပိုင်း အိန္ဒိယစတိုင် ဒန်ပေါက်က အရသာက နည်းနည်းစပ်ပေမယ့် ဆီလည်း မများတာမို့ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ပိုညီညွတ်ပြီ လုံးဝ မအီပါဘူး။ ကြက်သားကို ဒိန်ချဉ်နဲ့ နုပ်ထားတာမို့ အသားကလည်း အရမ်းကိုနူးအိပါတယ်။ ချက်တာလည်း ထင်သလို မခက်ပဲ လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်စားနိုင်မှာပါ။ ကြက်သား ဒန်ပေါက်ချက်နည်းလေးကို ခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်…
ဒန်ပေါက်ဆန် (basmati rice) ♦ နို့ဆီဘူး ၄လုံး (CityMart တွင် ၀ယ်ယူနိုင်သည်)
ဇီယာစေ့ ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
သီဟိုစေ့ ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းစာ
Saffron ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
မှတ်ချက် ။ ။ Saffron ဒန်ပေါက်ချက်ရာမှ အရောင်အတွက်ထည့်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မှာ ရှာမတွေ့တာမို့ ၀တ်ရည်ချက်တဲ့ ထဲတွင် ထည့်မချက်ထားပါ။
ကြက်ပေါင် ♦ ၆ခု (ထက်ပိုင်းပိုင်း ထားပါ)
ဂျင်း ♦ လက်တဆစ် (ထောင်းထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ ♦ ၂ခု (ထောင်းထားပါ)
ကြက်သွန်နီ ♦ ၃လုံး (ပါးပါးလှီးပါ ကြော်ထားပါ)
ဒိန်ချဉ် (yoghurt) ♦ ၁ခွက်စာ
ဆီ (oil) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်းစာ
လေညှင်း (cloves) ♦ ၂ခု
ဖာလာစေ့ (cardamon) ♦ ၄ခု
ဇာပွင့် (Javetri) ♦ ၃ခု
ကလာဝေရွက် (bayleaf) ♦ ၂ခု
သစ်ဂျပိုး ♦ ၁ခု
ဇီယာ (cumin) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ဇီယာမှုန့် (cumin pdr) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
နံနံစေ့မှုန့် (coriander pdr) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ငရုတ်သီးမှုန့် (chilli pdr) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ဆနွင်းမှုန့် (tumeric pdr) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
ငရုတ်ကောင်းလုံး (အမဲ) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်းတ၀က် (မညက်တညက် ထောင်းထားပါ) (black pepper corn)
ငရုတ်သီးစိမ်း (green chilli) ♦ ၆ခု (စိတ်ပေးပါ)
ဆား (salt) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
မာဆလာ (masala) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ပူစီနံ (mint) ♦ ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
နံနံပင် (coriander) ♦ ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
မှတ်ချက်။ ။ အိန္ဒိယ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို CityMart တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။ အရင်ဆုံး ဇလုံတစ်ခုထဲသို့ ထက်ပိုင်းပိုင်းသော ကြက်သားများကို ထည့်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီမှ ကြက်သားမှအပ နုပ်ထားရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို ဇလုံထဲသို့ ထည့်ပြီ သမအောင် ရောနုယ်ထားလိုက်ပါ။
၃။ သမအောင် ကြက်သားကို နုယ်ပြီလျှင် ၁နာရီခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် နုပ်ထားပေးပါ။
၄။ ကြက်သားကို နုပ်ထားစဉ်အတွင်း basmatic ဆန်ကို နာရီဝက်ခန့် ရေစိမ်ထားပေးပါ။ (မှတ်ချက် ။။ ရေစိမ်ပေးထားမှ ဒန်ပေါက် ထမင်းချက်ရာမှ ကောင်းပါမည်)
၅။ နာရီဝက် ရေစိမ်ပြီလျှင် ဇကာဖြင့် ဆန်များကို ရေပြန်စစ်ပေးပါ။
၆။ ထို့နောက် ဒယ်အိုးတစ်အိုးထဲသို့ ရေများထည့်ပြီ ဆူလာလျှင် ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း)၊ ဆား(စားပွဲတင်ဇွန်း၂ဇွန်း)၊ ဇီယာ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ) ထည့်မွှေပေးပါ။
ရ။ ပြီမှ ဆန်များကို လောင်းထည့်ပြီ ဆူလာသည်အထိ တည်ထားပေးပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဒန်ပေါက်ဆန်ချက်ရာတွင် ကျက်သည်အထိ မတည်ရပဲ၊ တ၀က်ပဲကျက်သည့်အနေထားထိသာ တည်ရမည်။
၈။ ဒါကြောင့် ဆူလာလျှင် ၁မိန်ခန့် ထပ်တည်ပြီ ဆန်များ တ၀က်ကျက်လျှင် မီးပိတ်ပြီ ဇကာဖြင့် ပြန်စစ်ထားပေးပါ။
၁။ ခုကြက်သား ဒန်ပေါက် စချက်ပါတော့မည်။
၂။ ဒယ်အိုးတစ်ခုထဲသို့ နုပ်ထားသော ကြက်သားများကို အရင်ထည့်ပြီ ခင်းထားလိုက်ပါ။
၃။ ကြက်သားအပေါ်မှ ဆန်များနှင့် သီဟိုစေ့များကို ခင်းလိုက်ပါ။
၄။ ထို့နောက်အပေါ်မှ နံနံပင်(အနည်းငယ်)၊ ကြက်သွန်နီကြော်၊ ငရုတ်သီး(ဆီချက်) (သို့) Saffron (စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ဖြူးပေးပါ။
၅။ ပြီနောက် အဖုံးအုပ်ကာ (မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ၅မိနစ်၊ မီးအသင့်တင့်ဖြင့် ၁၅မိနစ်၊ မီးနည်းနည်းဖြင့် ၁၀မိနစ်ခန့်) အားလုံး စုစုပေါင်း နာရီဝက်ခန့် တည်ထားပါ။
၆။ ကျက်ပြီဆိုလျှင် ဒန်ပေါက်ထမင်း နှင့် ကြက်သားများကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ဇွန်းဖြင့် သမအောင် ရောမွှေလိုက်ပါ။
ရ။ မြှောက်ပိုင်း အိန္ဒိယစတိုင် ကြက်သားဒန်ပေါက်ကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ..
Posted in အိန္ဒိယ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်း | 33 Comments
on April 3, 2012 at 3:34 pm | Reply Cho Wut Hmone
i wanna eat now…look so yuummy..so clever my twin….yep indian biryani is better than myanmar dan pout as it isalittle bit spicy…. Saffron is good for coloring the rice….
on April 3, 2012 at 3:38 pm | Reply chowutyee
Thanks Hmone Gyi yay… ကိုယ်လာတုန်းက မကျွေးလိုက်ရဘူး.. 😀
on April 3, 2012 at 4:09 pm | Reply cho cho chit
မမ .. ချက်နည်းလေးတွေပေးတာကျေးဇူးပါနော်..ကြိုးစားချက်ကြည့် ပါအုံးမယ်..
on April 3, 2012 at 4:10 pm | Reply chowutyee
ချက်စားကြည့်နော် sis.. စားနေကျ အရသာနဲ့မတူဘူး ပိုစားကောင်းတယ်.. 😀
on April 3, 2012 at 4:53 pm | Reply Khaing Zar Aung
Thanks for your share how to cooking.
I’ll try to cook like your way…:)
on April 4, 2012 at 5:38 am | Reply chowutyee
Plz try it Ma ! 😀
on April 3, 2012 at 5:06 pm | Reply ခင်ယမုံ
အခု ညီမလေးချက်ထားတာကို အစ်မရော အစ်မအမျိုးသားပါ အကုန်စားသွားပြီ..
on April 4, 2012 at 5:39 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ မခင်ယမုံ.. ၀တ်ရည်လည်း ၀ယ်ဝယ်ပြီ စုထားတာ။ Ocean Market မှာတော့ အကုန်လုံးနီးပါးရတယ် မလုပ်ကြည့်နော်..
on April 3, 2012 at 5:54 pm | Reply daw lay
on April 4, 2012 at 5:40 am | Reply chowutyee
ချက်ရတာ အဆင်ပြေအောင်ပါ.. ကျေးဇူးပါနော်
on April 4, 2012 at 2:00 am | Reply yumon
Thanks also 😛
on April 4, 2012 at 4:01 am | Reply nandar
အလုပ်ပိတ်တဲ့ နေ့လုပ်စားကြည်မယ်နော်…
on April 4, 2012 at 5:41 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါ မရေ.. စားလို့ အရမ်းကောင်းတယ်.. 😀
on April 4, 2012 at 3:23 pm | Reply eithet
that looks delicious , nyi ma lay
on April 4, 2012 at 3:25 pm | Reply chowutyee
Thanksalot Ma Ei Thet!! 😀 အရမ်းစားကောင်းတယ် မအိသက်၊ အားရင် လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 😛
on April 5, 2012 at 2:05 am | Reply စံစံ
၀တ်ရည်ရယ် အရမ်းတော်တာဘဲ။ စားချင်စရာလေး။ ကြိုးစားပြီး ချက်စားကြည့်ဦးမယ်။ ဒန်ပေါက်ကိုအရမ်းကြိုက်တာ။ အစားအစာတွေကို တစ်ခါတစ်မျိုးမရိုးရအာင် အပင်ပန်းခံတင်ပေးတဲ့ ၀တ်ရည်ကို ကျေးဇူးတင်လေးစားမိပါတယ်။
on April 11, 2012 at 3:57 am | Reply chowutyee
၀တ်ရည်ကလည်း အားပေးလို့ အထူးကျေးဇူးပါ 😛
on April 5, 2012 at 1:46 pm | Reply မြတ်
India market မှာသွားပြီး ပစ္စည်းအရင်စုပြီးမှ ဘဲချက်ရတော့မယ် ၊
အခုတော့ ညီမရဲ့ဒန်ပေါက်ကိုအ၀စားပြီး၊ ပါဆယ်ပါ ထုတ်သွားတယ်နော်
on April 11, 2012 at 3:58 am | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါ မမြတ်.. 😀
on April 11, 2012 at 2:18 am | Reply နွေဦး
အစ်မ တင်ထားတဲ့ပုံလေးကြည့်ပြီး အရမ်းကိုစားချင်သွားပြီ။ ဒီတပတ် လုပ်စားကြည့်လိုက်ဦးမယ်…..
on April 11, 2012 at 3:59 am | Reply chowutyee
Plz try it, sis.. It is realy yummy one! 😀
on April 27, 2012 at 7:18 am | Reply Saw Thandar
ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရယ် အမက ကိုယ်တိုင်ချက်ရတာ ၀ါသနာပါတယ် သိလား
on April 28, 2012 at 7:39 am | Reply chowutyee
Thanks also!!! 🙂
on May 1, 2012 at 2:37 am | Reply Chit Pyone Maung
အမ ရဲ့ ချက်ပြုတ်နည်းတွေ ကြည့်ပြီး ဆိုင်တောင် ဖွင့်လို့ရပီ…
မလေးရှားရောက်သူတွေအတွက် ဝမ်းသာစရာ webside လေးတစ်ခုပေါ့။
ဖိတ်ခေါ်ပြီး ချက်ကြွေးရမှာလဲ ရှက်မိပါရဲ့…
ကျွန်တော်ချက်တတ်တာဆိုလို့ ဘဲဥကြော်ပဲ ရှိတယ် ဟီးဟီး 😛
on May 2, 2012 at 11:33 am | Reply chowutyee
haaaa.. Don’t worry I love ဘဲဥကြော် also.. 😀
on May 1, 2012 at 2:16 pm | Reply lin kyaw
saffron အစား yellow color additives ကို သုံးလုိ့ရပါသည်။
on May 2, 2012 at 11:35 am | Reply chowutyee
on May 2, 2012 at 2:25 pm | Reply ko lay
အလုပ်ပိတ်မှ ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည့်မယ်
on May 2, 2012 at 2:50 pm | Reply chowutyee
Plz try it 🙂
on May 14, 2012 at 1:57 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] April 3, 2012 ကြက်သား ဒန်ပေါက် […]
on May 24, 2012 at 3:35 am | Reply nayoonaw
on March 14, 2014 at 10:28 am | Reply myat su
ဖြစ်နိုင်ရင်၊ မြန်မာပြည်မှာ၊ ရန်ကုန်မှာဝယ်စားနေကြတဲ့၊ ဒံပေါက်ကောင်းကောင်းချက် နည်းလေးရောပြောပြပေးပါလား။ အပြင်မှာဝယ်မစားဘဲ။ အိမ်မှာဘဲစိတ်တိုင်းကျချက် စားချင်လို့ပါ။ ကြက်သား၊ သီးစုံဒံပေါက်ချက်နည်းကိုမေးတာပါ။အခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ဒံပေါက်ချက်နည်းအတွက်လည်း၊